ग्लोबल टि–२० लिगः गेलले बनाए ५४ बलमा १२२ रन, तर खेल रद्द ! - Everest Dainik - News from Nepal
ग्लोबल टि–२० लिगः गेलले बनाए ५४ बलमा १२२ रन, तर खेल रद्द !
काठमाडौं, साउन १४ । क्यानडामा जारी ग्लोबल टि–२० लिग अन्तर्गत मंगलबार बिहान भएको भंकाकुर नाइट्स र मोन्ट्रीयल टाइगर्सविरुद्धको खेलमा नाइट्सका कप्तान क्रिस गेलले विष्फोटक ब्याटिङ गरेका छन् । उनले १२ छक्का र ७ चौकाको मद्दतमा ५४ बलमा नटआउट १२२ रन बनाए । उनी ग्लोबल टि–२० को इतिहासमा एकै खेलमा सर्बाधिक रन बनाउने पहिलो क्रिकेटरसमेत बनेका छन् । उनकै विष्फोटक प्रदर्शनमा भंकापुरले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएर २७६ रन बनायो ।
विशाल रन बनाउने क्रममा गेललले १२२, टोबिस भिस्सीले ५१, चडविक वाल्टसनले २९, रस्सी भानडुर ड्युसनले ५६ रन बनाए । बलिङमा टाइगर्सका सुनिल नारायण, दिलोन हिलिगर र शेन अबोटले एकएक विकेट लिए । गेलले विष्फोटक ब्याटिङ गर पनि प्रतिकूल मौसमका कारण दुवै टिमले अंक बाँडे । आयोजकले आधीसहित वर्षा हुने भएपछि खेल रद्द गरेको हो ।
ट्याग्स: क्रिस गेल, ग्लोबल टि–२० लिग, भंकाकुर नाइट्स Vs मोन्ट्रीयल टाइगर्स